Yini okufanele siyinake kwezemidlalo? -Diabetes Talks-Sinocare
Ukunakekelwa yisifo sikashukela
Uchungechunge lokuqapha kweGlucose
I-Multi-functional Monitoring Series
Iphuzu Lokuhlolwa Kokunakekela
Isixazululo Sethuluzi Lokuphathwa Kwedijithali
Imikhiqizo Yokuhlola Engangenisi
Imikhiqizo Yezithelo Zesifo Sikashukela
Imikhiqizo Yokuhlola yakwa-SARS-CoV-2
Yini okufanele siyinake kwezemidlalo?
Isikhathi: 2019-11-12 Hits: 248
Ngaphambi kokuqala kokuzivocavoca, badinga ukwenza ukuhlolwa okuphelele komzimba. Okuqukethwe ukuhlolwa kufaka phakathi: umfutho wegazi, i-lipid yegazi, i-glycosylated hemoglobin, umsebenzi wezinhliziyo, umsebenzi wezinzwa, umsebenzi wezinso, fundus nempilo yezinyawo nokunye. Udokotela uzohlela ukwelashwa okuvivinya okufanelekile ngokwesimo sakho somzimba.
Phuza amanzi ngesikhathi esifanele. Lapho isikhathi sokuzivocavoca sithatha ihora elingu-1, kufanele unake amanzi okuphuza. Kungcono ukuphuza okuncane izikhathi eziningi. Uma isikhathi sokuhamba esilindelekile sithola ihora eli-1, kungcono ukuphuza kusengaphambili ukugwema imiphumela emibi emzimbeni womuntu ngemuva kokuphelelwa amandla. Uma uzivocavoca umzimba isikhathi esingaphezu kwamahora ama-2, kufanele ucabangele ukuqhuba isidlo esingeziwe.
Gqoka izingubo ezifanele, izicathulo namasokisi. Kufanele bagqoke izingubo zokuphefumula ebusika, okusiza umzimba ukuba ujuluke futhi uvikeleke umkhuhlane. Lapho isimo sezulu sibanda kakhulu, akunconywa ukwenza imidlalo yangaphandle. Gqoka izicathulo ezihlukile ukwenza imidlalo ehlukile, njengokugqoka izicathulo zomdanso lapho udansa, ukugqoka izicathulo ezigijimayo lapho ugijimela, gqoka izicathulo zezintaba uma ukhuphuka izintaba nokunye. Lapho izicathulo zingahambi noma zingakhululeki, kufanele zithathelwe indawo masinyane. Amasokisi kufanele akhethwe umbala okhanyayo (omhlophe) futhi abe nesithukuthezi esihle. Ngemuva kokuzivocavoca, hlola izinyawo zakho uma zinemvelo ebomvu, ukuvuvukala, ukushisa nobuhlungu. uma kunjalo, kufanele usebenzelane nabo ngesikhathi esifanele.
Kufanele baqinise ukuqapha ushukela egazini ngaphambi nangemuva kokuzivocavoca. Lapho uvivinya ngokweqile noma uvivinya umzimba kakhulu, iziguli kufanele ziguqule okwesikhashana uhlelo lokudla nezidakamizwa, ukuze zigweme i-hypoglycemia.
Qapha ngokumelene ne-hypoglycemia Ngesikhathi sokuzivocavoca, izicubu zomzimba zizodla ushukela emzimbeni. Ngasikhathi sinye, ukuzwela kwe-insulin kuzothuthukisa. Indima emibili izohola ukunciphisa ushukela wegazi ngemuva kokuzivocavoca. I-Hypoglycemia ingenzeka emahoreni angama-2 ~ 12 ngemuva kokunyakaza, noma kungakapheli amahora angama-24. Lapho kukhula umfutho ngamandla, kuzoba isikhathi eside; Lapho beya kakhulu izehlakalo ze-hypoglycemia,
Uzoqala nini ukuzivocavoca nokuthi uzohlala isikhathi esingakanani. Sincoma oshukela ukuthi bazivocavoce ngemuva kwamahora angu-1 wokudla futhi bagweme imiphumela ephezulu kakhulu yemithi. Uma ufuna ukuzivocavoca, dinga ukunciphisa isilinganiso somuthi. Isikhathi sokuzivocavoca, ukuzivocavoca umzimba kufanele kube imizuzu okungenani engama-30 isikhathi ngasinye, isikhathi sokuzivocavoca sifinyelela okungenani imizuzu eyi-150 ngesonto. Ukuqeqeshwa ngamandla kuthatha imizuzu eyi-10 ~ 15 isikhathi ngasinye, okungenani izikhathi ezi-3 ngesonto; Ukuzivocavoca nezimo kufanele kuthathe imizuzu engu-5 10 imizuzu eyi-XNUMX njalo.
Ikhasi Langaphambili: Izizathu Eziyishumi Ezivamile Zokushintshashintsha Kweveli Yegazi Glucose
Ikhasi elilandelayo: Ukuthi udlani uma uhlushwa i-hypoglycemia?
Ikheli: No.265 Guyuan Road Hi-tech Zone, Changsha, Hunan, China
Izindaba & Izinkolelo
Ikhaya / Media / Ukunakekelwa yisifo sikashukela / Thwebula / Xhumana nathi
2001-2021 Sinocare AIl Amalungelo Agodliwe